အာနန္ဒာဘုရား - ပုဂံ / Wonder Bagan
၁၁ ရာစုမှ ၁၂ ရာစုအတွင်း
အာနန္ဒာ ကူဘုရားရဲ့ ပန္နက်က လေးဖက်လေးတန်မှာ အာရုံခံတန်ဆောင်း လေးခုပါတဲ့ ကြက်ခြေခတ်ပန္နက် ဖြစ်တယ်။ ဘေးဖက် အနား ပေ၂၀၀ နီးနီးရှိတဲ့ စတုရန်းပုံစံဖြစ်တယ်။ အဲဒီအပေါ်ကနေ ပင်မအဆောက်အဦက အမိုးကုန်းလျှော ပစ္စယာအဆင့်ဆင့်အထက်မှာ ကွမ်းတောင်နဲ့ သူ့အထက်က စေတီငယ်တို့က ပေ ၁၆၈ပေတိုင် တဖြည်းဖြည်း ရှူးတက်သွားတယ်။ သူ့ကို ငှက်မြတ်နားနဲ့ စိန်ဖူးတော်အထွဋ်ရှိတဲ့ ထီးတော်က အဆုံးသတ် အုပ်မိုးထားပါတယ်။
အောက်ခြေနဲ့ တက်သွားတဲ့ ပစ္စယာအဆင့်ဆင့်တွေကို လက်လက်ပြေးနေတဲ့ များပြားလှတဲ့ စဥ့်ပြားတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတယ်။ အဲဒီစဥ့်ပြားတွေပေါ်မှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဘဝဖြစ်စဥ်ဇာတ်တော်တွေနဲ့ မာန်နတ်ရဲ့ စစ်သည်တွေကို ရေးဆွဲထားပြီး မွန်စာနဲ့ ကဗျည်းရေးထိုးထားတယ်။
ကူဘုရားရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ အတိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပါန်မှာ ပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်တဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် လေးဆူကို ထားရှိပါတယ်။ မြောက်ကို မျက်နှာတော်မူလျက် ကကုသန် မြတ်စွာဘုရား၊ အရှေ့ကို မျက်နှာတော်မူလျက် ဂေါဏဂါမဏ (ဂေါဏဂုဏ်) မြတ်စွာဘုရား၊ တောင်အရပ်ကို မျက်နှာမူလျက် ကဿပ မြတ်စွာဘုရား၊ အနောက်အရပ်ကို မျက်နှာတော်မူလျက် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ဖက်နဲ့ တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ ရုပ်ပွားတော် နှစ်ဆူဟာ ဘုရားတည်စဥ်ကတည်းက ပူဇော်ထားတဲ့ ရုပ်ပွားတော်တွေဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရှေ့ဖက်နဲ့ အနောက်ဖက်မှာ ပူဇော်ထားတဲ့ ရုပ်ပွားတော် နှစ်ဆူကတော့ မူလရုပ်ပွားတော်တွေ မီးခပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် နှောင်းခေတ်လူတို့ အစားထိုး ပူဇော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွင်းပိုင်းမှာ စင်္ကြန်(လမ်း)နှစ်သွယ် ပါပါတယ်။ အတွင်းဖက်နံရံက ပျားလဘို့သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပြီး သေးငယ်တဲ့ အဆူဆူသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ကိန်းဝပ်ဖို့ နံရံမြှုပ်အခန်းငယ်(မုခ်ကပ်)တွေ အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ မှတ်သားစရာ အကောင်းဆုံး ရုပ်တုတွေကတော့ အပြင်နံရံမှာ အစီအရီထုထားတဲ့ အလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ဖွားမြင်ခန်းကနေ ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ မဟာပရိနိဗ္ဗာန်စံခန်းအထိဖြစ်တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘဝဖြစ်စဥ် ရုပ်ကြွပန်းတမော့တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနောက်ဖက်တန်ဆောင်းမှာလဲ သက်ရှိရွယ်တူ ရုပ်တုနှစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီရုပ်တုတွေကတော့ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးနဲ့ ရှင်အရဟံမထေရ်မြတ်တို့ရဲ့ ရုပ်တုတွေဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ခြေတော်ရာအစုံကိုလဲ အနောက်ဖက်တန်ဆောင်းမှာ ထားရှိပါတယ်။ ခြေတော်ရာတခုစီမှာ အချို့သော ပါဠိ အထကထာတွေမှာ ဖော်ပြကြတဲ့ ၁၀၈ ကွက် စက်လက္ခဏာတော် အမှတ်အသားတွေ ပါပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီခြေတော်ရာတွေအပါ် ရွှေအထပ်ထပ်ချတာရယ် ရေနဲ့ အထပ်ထပ် ဆေးကြောတာတွေရယ်ကြောင့် အဲဒီအမှတ်အသားတွေက ဘာရယ်လို့ ခွဲခြား မသိနိုင်အောင် ပျောက်ကွယ်ကုန်ပါပြီ။
အာနန္ဒာဘုရားဟာ ညောင်ဦးဖက်မှာရှိတဲ့ ရွှေစည်းခုံစေတီနဲ့အတူ ပုဂံမှာရှိတဲ့ တန်ခိုးအကြီးဆုံးဘုရားတွေထဲက တဆူဖြစ်ပါတယ်။ မော်ကွန်းအမှတ်အသားတွေအရ အာနန္ဒာဘုရားကို ကျန်စစ်သားမင်းကြီးက ပုဂံခေတ်ဦးပိုင်းမှာ တည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတဲ့ ပန္နက်ချ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကိုတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ပုဂံပျက်တဲ့နောက် တောက်လျောက်ပဲ အလှူဒါယကာတွေက အာနန္ဒာဘုရားကို ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြပါတယ်။
The architectural wonder of the temple is the natural ventilation system by means of windows built inside the thickness of the walls.
The arch span was formed by laying the baked bricks inaradiating pattern and placing stone bricks as wedges between them.
အာနန္ဒာဘုရားပွဲတော်ကို နှစ်စဥ် ဇန်နဝါရီလတဝိုက်မှာ ကျင်းပပါတယ်။ ပွဲတော်ရဲ့ အထင်ကရတွေကတော့ ညပိုင်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ဒေသထွက်နဲ့ ရိုးရာပစ္စည်းတွေ ခင်းကျင်းရောင်းချတဲ့ ဘုရားပွဲဈေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။